Vaovao - Ny toetra sy ny fenitry ny masinina sarontava trondro
Ny saron-trondro dia tokony hahatratra ny fenitra EU en149: 2001 P3. Ampiasaina indrindra izy io mba hisorohana ny vovoka indostrialy sy setroka vy faran'izay tsara mandritra ny fiasan'ny welding. Maherin'ny 99% amin'izy ireo no manana fahombiazan'ny filtration, izay mety kokoa amin'ny tontolo mando sy mafana na miaro amin'ny akanjo maharitra lava; dia mety amin'ny fiarovana ny vovoka amin'ny fananganana, fitrandrahana vato, lamba, fikosoham-bary, fanariana vy, fanafody, elektronika, fanafody, fanodinana akora ary fikolokoloana ary indostria hafa. Izy io koa dia misy fiantraikany tsara amin'ny vovoka amin'ny rivodoza.
Masinina karazana masinina trondro mekanika Bangyin dia milina mandeha ho azy amin'ny famokarana vatan'ny sarontava. Mampiasà teknolojia ultrônônika izy io mba hampifamatotra ny sosona 3-5 an'ny lamba tsy tenona PP, ny gazy karbonika sy ny fitaovana sivana ary manapaka ny vatan'ny sarontava. Araka ny akora samihafa ampiasaina, ny sarontava novokarina dia afaka mifanaraka amin'ny fenitra samihafa toa ny FFp1, FFP2, N95, sns. Ny tadin'ny sofina dia lamba vita amin'ny kofehy tsy vita amin'ny kofehy, izay mahatonga ny sofin'ilay mitondra mahazo aina sy tsy misy tsindry. Ny sosona lamba sivana amin'ny sarontava dia misy vokany tsara amin'ny sivana, izay mifanentana tanteraka amin'ny endrika tarehy aziatika, ary azo ampiharina amin'ny asa fanamboarana, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary indostrialy fandotoana ambony hafa.
1. Izy io dia afaka manamboatra vatana saron-tava toy ny milina fanaronana vovoka karazana trondro, izay azo zahana indray mandeha.
5. Ny firaka aliminioma dia ampiasaina amin'ny masinina manontolo, izay tsara sy mafy orina tsy misy harafesina.
6. Fitaovana mandroso sy mandray fitaovana.
7. Fiakarana avo sy tahan'ny tsy fahombiazana ambany.
sarontava sarimihetsika, na saron-tava tsotra fotsiny. Ny fotokevitra iasany dia ny fanaovana ny rivotra misy zavatra manimba voasivana sy nodiovina tamin'ny sivana saron-tava, ary avy eo nokaina.
Ny respirator karazana famatsian-drivotra dia manondro ny loharanon-drivotra madio misaraka amin'ny akora mampidi-doza, izay alefa amin'ny tavan'olona iray noho ny fifohana rivotra amin'ny alàlan'ny catheter amin'ny alàlan'ny hetsiky ny herinaratra toy ny rivotra compressor, fitaovana varingarina vita amin'ny rivotra, sns.
Ny sarontava karazana sivana no be mpampiasa amin'ny asa isan'andro. Ny fomba fisafidianana sy ny fampiasa ny saron-tava toy izany dia voalaza etsy ambany. Ny firafitry ny sarontava sarontava dia tokony hozaraina roa. Ny iray dia ny vatan'ny sarontava, izay azo takarina tsotra ho toy ny sarin'ny sarontava; ny iray kosa dia ny ampahany amin'ny sivana, ao anatin'izany ny landihazo sivana ho fisorohana vovoka sy boaty sivana simika ho an'ny anti-virus. Noho izany, ho an'ny fisafidianana sy fampiasana sarontava mason-tsivana, ny vokatra sasany any Guangjia dia manome anao izao fahafaha-manao manaraka izao, izany hoe, afaka mampiasa vatana sarontava mitovy ianao, ary rehefa mila manaporofo vovoka amin'ny tontolon'ny vovoka ianao dia afaka mitafy ny landihazo sivana mifanaraka amin'izany, mba hahafahanao manao sarontava vovoka; rehefa mila manao fisorohana gazy amin'ny tontolo misy poizina ianao, soloo ny landihazo sivana ary ampiarahina amin'ilay fitaovana ilay boaty sivana simika mifanaraka amin'izany, ka lasa saron-tava, na arakaraka ny filan'ny asanao, hanomezana fitambarana bebe kokoa aminao
Fampidirana fohy ireo fitaovana sivana ho an'ny sarontava
Ny fitaovana sivana amin'ny sarontava miaro dia mizara ho sokajy roa, dia ny vovoka sy ny anti-poizina. Ny andraikitr'izy ireo dia ny manaparitaka aerosol manimba, ao anatin'izany ny vovoka, setroka, orona zavona, etona misy poizina ary etona misy poizina, amin'ny alàlan'ny fitaovana sivana, hanakanana azy ireo tsy ho sempotra.
Ny fampiasana saron-tava ankapobeny, ny sarontava dia tsy maintsy refesina sahaza, mitafy ny fomba tsy tokony ho izy, ny saron-tava no hahomby. Ireo sarontava amidy eny an-tsena amin'ny ankapobeny dia mizara ho mahitsizoro sy miendrika kaopy. Ilay sarontava mahitsizoro dia tokony hanana sosona taratasy telo farafahakeliny mba hisy vokany miaro. Ny mpampiasa dia tokony hanery ny tariby amin'ny sarontava amin'ny tetezan'ny orona, ary avy eo manaparitaka ny saron-tava iray manontolo amin'ny tetezan'ny orona, mba hitana andraikitra mahomby. Afaka manao sarontava fandidiana mahitsizoro ny ankizy, satria tsy misy endrika miorina, raha voafatotra tsara, dia afaka manakaiky ny endrik'ilay zaza. Ilay sarontava miendrika kaopy dia tokony ho azo antoka fa ny hakitroky ny saron-tava dia ampy aorian'ny fametahana azy amin'ny tarehy, mba tsy hivoaka ny fofonaina amin'ny rivotra mba hahomby. Rehefa manao sarontava miendrika kaopy dia sarony amin'ny tanana roa ilay sarontava ary manandrama mitsoka. Hamarino raha misy fivoahan'ny rivotra avy amin'ny sisin'ny sarontava. Raha tsy tery ilay sarontava dia tokony alaharoo alohan'ny hanaovana azy ilay toerana.
Rahoviana aho no mila manova ny sarontava
1. voaloto ilay sarontava, toy ny tasy ra na ny rà mitete
2. Nahatsapa ny mpampiasa fa nitombo ny fanoherana ny taovam-pisefoana. Vovon-tsivana fanamarinana vovoka: rehefa mifanaraka tsara amin'ny tarehin'ilay mpampiasa ny sarontava, rehefa mahatsapa fanoherana mahery vaika ny mpampiasa, midika izany fa feno vovoka ny vovoka sivana ary tokony hosoloina.
3. Simba ny sarontava
4. Eo ambanin'ny fepetra mikatona tsara ny sarontava sy ny varavaran'ny mpampiasa, rehefa maheno ny fofon'ny poizina ny mpampiasa, dia tsy tokony hanaovana vonjimaika ny sarontava vaovao. Raha ny fahitana ny rafitry ny fisiolojika olombelona, ​​ny rà mandriaka avy amin'ny mucosa orona dia matanjaka be.
milina fanaovana sarontava, masinina fanaovana maska ​​tarehy, milina fanaovana sarontava tarehy tsy tenona, milina clamping hosotra, milina fanaovana maska ​​tsy tenona, masinina mpanamboatra sarontava tarehy,